जाने होइन पाथीभरा ? «
पाथीभरा देवीको दर्शनका लागि अहिले उपयुक्त समय होइन । मंसिर लागेसँगै चिसो बढ्दा दर्शनार्थीको संख्या घट्दै जान्छ । तर, यसपटक मंसिरको तेस्रो साता लागिसक्दा पनि पाथीभरा दर्शन गर्न जानेहरूको चहलपहल पहिले जस्तो घटेको छैन ।
अटल सौभाग्यकी प्रतीक मानिने पाथीभरा देवीको दर्शनका लागि विशेष गरी दशैँ बिदाको सदुपयोग गर्न पुग्नेको लाम लाग्छ । मुलुकमै पहिलो घामको झुल्को पर्ने जिल्लाको रुपमा परिचित सुदूर पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ ।
वर्षायाम सकिएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुँइचो लाग्ने गरेको छ पाथीभरा मन्दिरमा । हिउँदमा चिसो बढेपनि दर्शनार्थीको चाप भने घटेको देखिँदैन । नेपालका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट पाथीभरा माताको दर्शन गर्न मानिसहरू पुग्ने गर्छन् । मनोकांक्षा पुरा हुने आशामा पाथीभरा माताको दर्शन गर्न पूर्वी जिल्लाबाट मात्र होइन काठमाडौँ, धनगढी, पोखरा, भारतको आसाम, दार्जीलिङ र तेस्रो देशबाट आउने मानिसहरूसमेत भेटिन्छन् ।
पछिल्लो समय पदयात्रा र प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन चाहने युवापुस्ताको जमात पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरूका लागि पनि पाथीभरा सुरक्षित र आरामदायी गन्तव्य हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रबाट विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण, मकालु, काङ्वाचेन, लोत्से हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । उदाउँदो र अस्ताउँदो घामको दृश्यावलोकन, जैविक विविधता अनुसन्धाताहरूका लागि प्राकृतिक संग्रालयका रुपमा यो क्षेत्र मानिन्छ ।
फुङलिङ बजारबाट सुकेटारसम्म पक्की सडक भएपनि सुकेटार विमानस्थलदेखि सानोफेदीसम्म भने कच्ची सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । कच्ची सडकका कारण होचा गाडी र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरूले पनि सुकेटार विमानस्थलदेखि अघि बढ्न सकिँदैन । सानोफेदीसम्म पुग्न ट्याक्सीमा नै यात्रा गर्नु पर्छ ।
उकालो चढ्न सक्नुभएन ? चिन्ता नलिनुस्
अझ घरेलु उपचार सामग्रीहरू तातोपानी, भुटेका मकै, अदुवा, गरम खाद्य, चक्लेट, मिसिरी, पेय पदार्थ र न्यानो कपडाले पाथीभरा यात्रा सहज बनाउने पदयात्री धनगढीकी माया ढकालले बताउँछिन् । ‘पाथीभरा आउँदा मोबाइल, लौरो, क्यामेरा त सारथी नै हुन्’ उनी थप्छिन् ।
त्यसो त पाथीभराको कठिन यात्रा गर्न नसक्ने तर चाहना भएकाहरूका लागि स्थानीयले भरियाको काम पनि गरिदिन्छन् । सानोफेदीबाटै अशक्त दर्शनार्थीलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थानीय युवाले भरियाको कामसमेत गरेको देख्न सकिन्छ ।
स्थानीयका अनुसार भरियाले मन्दिरसम्म पु¥याएको शरीरको तौल अनुसार प्रतिकिलो एक सयदेखि दुईसय रुपैयाँका दरले शूल्क लिने गरेका छन् । यसरी मानिस बोक्ने भरीयाले सिजनमा मासिक ६० हजारसम्म कमाउने गरेको बताउँछन् । विशेष गरी तराई तथा शहरी क्षेत्रका मानिसलाई बोक्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।
आजभोलि पाथीभरा दर्शनका लागि हवाइ यात्रा गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको स्थानीयको अनुभव छ । अहिले दैनिक जसो हेलिकप्टर चार्टर गरेर दर्शनार्थीहरू तीर्थाटनका लागि आउँछन् ।
देवीको उत्पतिसम्बन्धी किम्बदन्ती अनुसार भेडी गोठालाले गोठ पाथीभरामा सारेका बेला उनको सबै भेडाहरू हराएपछि उनी चिन्तित भएका थिए । राति देवीले आत्मबोध गराउँदै भेडा बलीसहित पूजाअर्चना गर्न निर्देशन दिएपछि उनले सोही अनुसार वलीसहित पूजा गरेपछि हराएका सबै भेडा फेलापरेका थिए । त्यसपछि देवीलाई साक्षत देवीको रुपमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन रहिआएको धार्मिक मान्यता छ ।
परम्परागत मान्यता अनुसार ‘आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउने’ भनेर परिचित यहाँ नौरथा सुरु भएपछि दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्छ । यहाँ पशुबली अनिवार्य नभए पनि दर्शनार्थीहरूले बोका, भेडा बली चढाउन सक्छन् ।